यि हुन मुन जे इनपछि कोरियाको सम्भावित नयाँ राष्ट्रपति, डेमो-क्रेटिक पार्टिबाट उम्मेदवार बन्दै ! - Thulo khabar
यि हुन मुन जे इनपछि कोरियाको सम्भावित नयाँ राष्ट्रपति, डेमो-क्रेटिक पार्टिबाट उम्मेदवार बन्दै !
सोउल : दक्षिण कोरियामा अर्को बर्ष हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि त्यहाँको मुख्य तथा अहिलेको सत्ताधारी पार्टी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी अफ कोरिया’ ले आफ्नो उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ।
ख्यङ्गीदो प्रदेशका गभर्नर लि जेइ म्यङ मुन जे इन पछिको राष्ट्रपतिका लागि डेमेक्रेटिक पार्टीबाट अर्को बर्ष हुने निर्वाचनमा भिड्ने भएका हुन। उनले आइतबार राजधानी सउलमा सम्पन्न पार्टीको ‍राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि भएको क्षेत्रिय निर्वाचनमा
११ औं अर्थात अन्तिम चरणमा पनि जित निकाल्दै राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार चयन भएका हुन। सउल प्राइमरीमा ५६ बर्षका लि ले कुल खसेको ८८ हजार ८ सय ९३ मतमध्ये ४५ हजार ७ सय ३७ भोट ल्याएका थिए। यो मत कुल खसेको मतको ५१.४५ प्रतिशत हो। उनि भन्दा पछि डेमोक्रैटिक पार्टीका पूर्व चेयरम्यान लि नाक योन रहेका थिए।
उनले ३२ हजार ४ सय ४५ भोट ल्याएका थिए। यो भोट कुल खसेको मतको ३६.५ प्रतिशत हो। दक्षिण कोरियामा सन २०२२ को मार्च ९ तारिखमा राष्ट्रपतिय निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको छ।
राष्ट्रपतिका लागि मुख्य प्रतिपक्षि पार्टी ‘पिपुल पावर पार्टी’ ले भने आफ्नो उम्मेदवार छान्न बाँकी नै रहेको छ। लि जे म्योङले कुल ७ लाख १९ हजार ९ सय ९ भोट पाएका हुन। यो भोट कोरियाका सातैवटा क्षेत्रिय प्राइमरीहरुमा खसेको कुल भोटको ५०.२९ प्रतिशत हो। लि नाक योङले ५ लाख ६० हजार ३ सय ९२ भोट मात्रै पाएका थिए।
अन्य दुई प्रतिष्पर्धीहरुमा पूर्व न्याय मन्त्री छो मि ए र पार्क योङ जीन रहेका थिए। ख्यङ्गीदो प्रदेशका गभर्नर समेत रहेका उनले कोरियाका सबै क्षेत्रिय प्राइमरीहरुमा जित निकाले पनि ख्याङ्जु र छल्लानाम्दोमा जित्न सकेका थिएनन।
गत शनिवार उनले आफ्नो क्षेत्र ख्यङ्गीदो प्रदेशमा जम्मा ९५ हजार ८ सय ४१ भोटमा ५६ हजार ८ सय २० भोट प्राप्त गरेका थिए। यो भोट कुल भोटको ५९.२९ प्रतिशत हो। यस क्षेत्रमा लि नाक योङले २९ हजार २ सय ४८ भोट ल्याएका थिए जुन ३०.५२ प्रतिशत हो।